Waa maxay Liiska Qiimeynta Gawaarida? (2014-shaashadda qiimeynta gawaarida) | RayHaber | raillynews
HometareenkaWaa maxay liiska qiimaha kormeerka baabuurta? (2014-shaashadda baaritaanka qiimaha baaritaanka baabuurta)
22 / 05 / 2014 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Waa Maxay Liiska Qiimeeyaha Kormeeridda Gaadiidka: Waa imisa qiimaha koontaroolida gaariga? Ka hor intaadan gaarin baaritaanka, waxaad waydiisan kartaa qiimaha kormeerka.
Kharashka Kormeerka Gawaarida ayaa lagu go'aamiyey sida soo socota:
Baska, Gaadiidka, Gawaarida iyo Tanker 223,02 TL
Gawaarida, Minibuses, Gawaarida fudud, Gaadiidka Gaarka ah, Gawaarida Guryaha,
Trailer iyo Semi Trailer 165,20 TL
Tractor (oo leh rikoodh, oo aan lahayn trailer), Baaskiilada iyo Baaskiilka Motorized 84,96 TL
Lacagta waxaa lagu aqbalaa lacag caddaan ah.
Wasaaradda Gaadiidka, Gaadiidka iyo Isgaarsiinta waa in ay go'aamiyaan nooca baabuurta laga qaadi doono baabuurta aan ka ahayn qaybaha baabuurta kor ku xusan.
2918 ayaa tiriyay Sharciga Gaadiidka Wadooyinka ee Trafik Highways. Iyadoo la tixraacayo Qodobka, baabuur kasta maray muddo kormeerka, lacag kormeerka bil kasta ee KDV dib u dhac ku jira edilir.fiyat qiimaha lagu eedeeyay heer ah in ka badan 35% ah.
Fiiro gaar ah: Kormeerka baabuurta lagu go'aamiyey inuu yahay "Ba'an Ba'an" ama n Maqnaan aan ku xirneyn natiijada warbixinta kormeerka lama ogolaanayo. Gawaaridan ayaa baaritaan ku sameeyn kara bilaash ah isla rugta baaritaanka isla bil gudaheed. Kharashka baadhitaanka waxaa laga soo qaadaa baabuurta dib loo baaray ama aan dib loogu soo celin kormeer bil gudaheed.
FADLAN MACLUUMAAD KU SAABSAN MACLUUMAAD KU SAABSAN ARRIMAHA
Faa'iidooyinka Kormeerka Waddanimada
Kormeerka Wadada U Qalmidda Nidaamin U Qiimeysnaanta Wadooyinka
Gawaarida, gawaarida xamuulka iyo booyadaha 111,51 TL 278,78 TL
Gawaarida iyo gawaarida 82,30 TL 206,50 TL
Waa inaad haysataa Kormeerka Gawaarida Wajiga ah ee Kormeerka wadista.
Haddii Kormeerka Dareemidda Wareeggu uu dhaco, Baaritaankaaga Wajiga ah waa in la fuliyaa iyada oo la socota Kormeerka Wanaagsanaanta.
Lacagta dib u dhigida ee 5 ee baabuurta ka sarreysa taariikhda ansaxinta kormeerka ugu dambeeya waxaa sidoo kale lagu soo dalacayaa kharashka kormeerka wakhti kasta. Qiimaha adeegga qiimeynta wadooyinka ayaa lagu go'aamiyaa sida ay isugu xigaan wasaaradda gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta. Qiimaha waxaa ku jira VAT.
Khidadaha Kormeerka Gawaarida Gurmadka (Qiimayaasha) Liiska 2014
Kormeerka Gawaarida Gaadiidka Gaadiidka Van Truck Price
Qiimaha Kormeerka Gawaarida ayaa lagu soo dalacayaa van
Gaadiidka, baska yar, gawaarida, gaari gaar ah oo gaar ah, semi-trailer
Qiimeeynta baabuurta ee baabuurta gawaarida Qiimeeynta Gawaarida Qiimaha qiimaha biilka
Tüvturk qiimaha baaritaanka gaadiidka ee basaska, baabuurta, gawaarida iyo booyadaha
Qiimeeyaha Qiimeeynta Gaadiidka Gawaarida Qiimeeyaha Qiime Bixinta Qiimaha Gawaarida Qiime Bixinta Mootada
Gaadiidka (leh ama aan lahayn tareen), Baaskiiladaha iyo qiimaha baaskiilka
XADKA 10 in la tixgeliyo ka hor Kormeerka Gawaarida!
TÜVTURK Xarumaha Kormeerka Gawaarida, oo bixiya adeegyada kormeerka gaadiidka ee dalka oo dhan si waafaqsan heerarka ay bixiso Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, waxay wadaagaan macluumaadka ku saabsan tallaabada aasaasiga ah ee 10 kaas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo ka hor inta aan la baadhin.
Agaasimaha Horumarinta iyo Agaasimaha Ganacsiga ee TÜVTURK Koray Özcan ayaa sheegay in kormeerka wareega ee gaadhiga uu yahay qodob muhiim ah oo kor u qaadaya amniga maaha oo kaliya dadka isticmaala, laakiin sidoo kale dadka kale ee gaadiidka. Waxaan sidoo kale dooneynay inaan la wadaagno waxa loo baahan yahay in la sameeyo ka hor kormeerka si loo kordhiyo wacyigelinta kormeerka gaadiidka iyo in macaamiisheenna ay ka dhigaan hababka kormeerka si sahlan. "
Özcan wuxuu yidhi, “Ujeeddadayada daraasaddan ayaa ah in milkiilayaasha gawaarida ay helaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nidaamka kormeerka.” TüvTurk, Turkey ee 81 gobol, 73 mobile, 197 go'an iyo Istanbul iyo Antalya gaar ah mooto 3 sheegay in wadar ahaan 273 saldhigyada wada jir ah ula saldhigga Gunter Ozcan, milkiilayaasha baabuurta, wixii macluumaad TüvTurk web site rasmi ah http://www.tuvturk.com.tr adeegga macaamiishana waxaa laga heli karaa 0 850 222 88 88.
Halkan waa tallaabada muhiimka ah ee 10 ee kormeerka ka hor:
1. Samee ballantaada oo bilaash ah!
Milkiilayaasha gaadiidka ee wakhtiga kormeerku waxay samayn karaan ballan ah maalinta iyo wakhtiga ay go'aamiyeen iyada oo aan tagin xarumaha kormeerka TÜVTÜRK. ballamaha, www.tuvturk.com.t waa 0 850 222 88 waxaa laga heli karaa xarunta bilaashka 88 lacag la'aan. Adeeggan waxaa laga heli karaa inta badan xarumaheena.
2. Haddii aad ballan samaysanayso xarumo mashquul ah xarumaha waaweyn, ugu yaraan saacadaha 2 ee habka kormeerka oo jadwal ku samee waqtigaada waqtiga ...
Waqtiga ballanta ee laga soo qaato bogga TÜVTÜRK ama xarumaha wicitaanku ma sheegayo wakhtiga bilowga baadhitaanka, laakiin muddada nus-saac ee macaamilka aqbalaya milkiilaha baabuurta.
Tusaale ahaan, 08.30 - 09: Ballanta loogu talagalay 00, oggolaanshaha macmiilka ee gaadiidka waxaa la saadaalinayaa saacadaha 08.30-09.00.
Nidaamka kormeerka gaadiidku wuxuu celcelis ahaan saacadaha 1 qaadanayaa ka dib marka la aqbalo. Iyadoo la tixgelinayo gelitaanka saldhigga, aqbalaadda macaamiisha iyo habka baaritaanka iyo baaritaanka, waxaan ku talineynaa in saacado isku xidha saacadaha 2 iyo in waqtiga loo qorsheeyo si waafaqsan, gaar ahaan xarumaha mashquulka ah ee xarumaha caasimadda.
3. U hubso inaad hubiso canshuurtaada ama ganaaxa, haddii lacag lagugu leeyahay, ha imaadin imtixaanka!
Iyadoo la raacayo shuruucda sharcigu dhigayo, baaritaannada deynta ayaa lagu sameeyaa baabuurta inta lagu jiro habka ballanta iyo ka hor inta aan la eegin kormeerka iyo ganaaxa gaadiidka, canshuuraha baabuurta baabuurta iyo buundooyinka iyo deynta wadooyinka waa la waydiiyaa. Gawaarida deymanka looma kormeeri karo xitaa haddii balan la sameeyo. Sababtan awgeed, waxaanu xusuusineynaa milkiilayaasha baabuurta inay bixiyaan deynta haddii ay leeyihiin deyn ka dib markay bartaan xaaladda deynta xilliga ballanta.
4. Fiiri qiyaasta qiiqa qiiqa ka hor inta aan kormeerka la sameyn! Waxaad adeeggan ka heli kartaa xarumaha TÜVTÜRK.
Maqnaanshaha qiyaasta gaasta gaasta oo gaabis ah ayaa loo tixgeliyaa Qalab culus. Adeeggan waxaa la siiyaa dhammaan goobaha kormeerka gaadiidka heerarka caalamiga ah.
5. Had iyo jeer lahow liisankaaga, Aqoonsiga, Caymiska Gaadiidka ee qasabka ah iyo dukumintiyada kale ee qasabka ah
Markaad timaado saldhigyada adeegga kormeerka, liisankaaga gaadiidka, aqoonsiga iyo caymiska gaadiidka waa inuu kula jiraa. Haddii gaarigaagu yahay LPG / CNG, waxaa loo baahan yahay Warbixinta Gaaska. Si kastaba ha noqotee, maqnaanshaha dukumiintigan waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay Jahwareer.
6. Haddii aadan laheyn gaariga, hubi inaad keento dukumiintiyo dheeraad ah.
Haddii gaadhiga aad iwadeynayso aanu adiga ahayn, waa inaad keentaa dukumiintiyo muujinaya xaaladda qareenka. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladaha kaladuwan ee dadka iyo shirkadaha dhabta ah http://www.tuvturk.com.tr Waxaad macluumaad ka heli kartaa…
7. Haddii aad u imaaneyso kormeerka wax ka bedelka, hubi inaad haysato dukumintiyadaada ku habboon adiga.
Haddii la sameeyo beddelid ah in aad gaariga, kormeerka dhismaha inaad la tashato iyo gaaska lagu daro dokumentiyada kor Awdida Report Assessment Report iyo Rakibaadda (mashaariic ka beddelid LPG / CNG lifaaqaaya waxaa looga baahan yahay macaamiisha codsada saldhigga ah), barbaro by injineerka karti ansixiyey mashaariicda diinta iyo xisaabaha la Drivers Turkey iyo Shahaadada EK-1 waxaa laga codsadaa qolalka ku xiran Xiriirka Automobile.
8. Fadlan ogow in lacagaha oo dhan ay ku jiraan lacag caddaan ah!
Qiimaha Kormeerka Gawaarida waxaa lagu go'aamiyaa sanad walba si waafaqsan wareegtada iyo amarrada Agaasimaha Guud ee Xeerka Wadooyinka ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta. Lacagta waxaa lagu helaa lacag caddaan ah.
Khidadaha imtixaanka sanadka ee 2014 waa sida soo socota.
• Baska, Gaadiidka, Gawaarida iyo Tanker 223,02 TL
• Gawaarida, Minibuses, Gawaarida, Gaadiidka Gaarka ah, Gawaarida Gawaarida, Gawaarida iyo Gawaarida 165,20 TL
• Gawaarida (oo leh rikoor, aan lahayn tareen), Baaskiilad iyo Baaskiilada Baabuurta 84,96 TL
Qiimaha cabbirka qiiqa ee sanadka ee 2014 waa 35 TL. Marka ugu horeysa, gawaariyayaashu waa inay lahaadaan Liisanka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee 6 TL.
9. Dib ha u dhigin baaritaankaaga, ha ka badin!
2918 Tirada 35 ee Sharciga Gaadiidka Waddooyinka. Sida waafaqsan qodobka, gaadiidka la socda nidaamka kormeerka waxaa lagu soo oogayaa kharashka qiimaynta ee 5 ee bisha kasta oo dib loo dhigo. Sharci ahaan, dib-u-dhacyo ayaa ka dhacaya xalalka 30 maalinlaha ah. 1 maalin kasta ama 20 dib u dhigis maalinle ah ayaa loo qiimeeyaa bilaha 1.
10. U hubso inaad hubiso qalabka lagama maarmaanka ah kahor intaadan imtixaanka gelin.
Xilliga kormeerka gawaarida, 1 xirmada gargaarka degdegga ah, 2 milkiilaha saddex xagalka, qalabka dabdemiska dhammaan baabuurta, marka laga reebo taraafikada, mootooyinka iyo baaskiiladaha gawaarida (tirada iyo tirada gawaaridu way kala duwan yihiin iyadoo loo eegayo nooca iyo ujeeddada loo adeegsanayo; http://www.tuvturk.com.tr) iyo haddii uu jiro leysku haleelo oo firaaqadiisa la hubiyey, cilladdooda waxaa loo tixgeliyaa inay cillad yar leedahay.
Looma baahna inaad haysato boorsada shaagagga ah ee gawaarida asal ahaan aan haysan gaashaan, sida baabuurta aan lahayn taayirada aan duubnayn ama xirmada dayactirka taayirada.
Milkiilayaasha mootada ayaa looga baahan yahay inay koofiyaddooda keenaan baaritaanka.
Weydiimaha Baaritaanka Xadgudubka Kala-guurka ee HGS | Weydiinta Ganaaxyada Wadooyinka | Weydiimaha HGS dheelitirka…
2014 HGS iyo OGS Su'aalaha Dembiyada
Su'aalaha Ganaaxa Gaadiidka iyo Bixinta 2014
Su'aalaha TÜDEMSAŞ way socotaa
Sababtoo ah TCDD ma waydiisanayso khaladaadka maalgashiyada tareenka
Sharciga Gaadiidka Waddooyinka
Agaasimaha Guud ee Xeerka Wadooyinka
Barnaamijka "ITU Rail Systems" Barnaamijka "Graduate Programs"
Yeshilhisar Suburb Isdhaafsashada